Madagasikara tany lovain-jafy hoy ny Hfkf - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Raharinirina Lalaina il y a 21 jours
Mitodika ny 60 taona lasa. Mibanjina ny 40 taona ho avy na ny taona 2060 Raha nosokafana tamin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana tao amin’ny FJKM Atsimon’Imahamasina ny fitadiavam-baha-olana ho an’ny firenena izay nataon’ny HFKF ny 14 Oktobra 2020, dia nofaranana tao amin’ny FLM Ambatovinaky kosa izany ny 24 jiona 2021.
Famelabelaran-kevitra mitety faritra no nentin’izy ireo nanatanteraka izany; niarahana tamin’ireo teknisiana sy manam-pahaizana kristiana. Ny soso-kevitra sy ny fehin-kevitra ary ny tetik’asa voaangona tamin’izany no natambatra ho « Harambaton-kevitra maro tohanan’ny maro »; izay boky sori-dalana ho an’ny « maro », fa indrindra ho an’ireo izay miomana hitondra firenena manomboka eto. Azo hatsaraina sy hatevenina hatrany, isaky ny misy hevitra mahasoa tsy mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra sy azo tanterahana tsara miainga avy amin’ny Kristiana sy ny Malagasy, izay antsoina eto hoe « maro » na dia efa 241 pejy aza ny «Harambaton-kevitra maro tohanan’ny maro ».
Mifototra sy miorina amin’ny tenin’Andriamanitra ny harambaton-kevitra. Boky natao tari-dalana ho an’izay hitondra an’i Madagasikara sy mampandraisana andraikitra ny kristiana malagasy amin’ny fiainam-pirenena.
Nambara fa miditra amin’ny vanim-potoana vaovao i Madagasikara, izay tsy natao hivezivezena any an’efitra intsony, fa hidirana amin’ny planin’Andriamanitra sy anaovana ho mpianatr’i kristy ny firenena ; ary hialana amin’ny rafitra izay mangeja an’i Madagasikara tsy ho masimandidy eto amin’ny taniny ; na dia mbola miandry ny famadihana ho lalàna ny sasany amin’ireo tetik’asa aza ny fanatanterahana izany. Fanamby goavana izany, saingy raha ny zanaka no hahafaka, dia ho afaka tokoa ny Firenentsika. (Jaona 8 :36)
Ankoatra ny fanazavana ny tantara sy ny antony ary ny vontoatin’ny boky « Harambaton-kevitra maro tohanan’ny maro », dia afaka niresaka sy namaly ny fanontanian’ireo mpanao gazety mahakasika ny sehatra misy azy ihany koa ireo solontena isam-bovonana ao anatin’ny Hfkf: ny Fivavahana, ny Fianakaviana, ny Fanabeazana, ny Politika, ny Serasera, ny zava-kanto sy Fialam-boly, Ny Fihariana, ny Siansa sy ny Teknolojia vaovao, ny Tanora. Dia ireo sehatra 9 izay tena iasana sy ampiasain’ny Hfkf ary ampirisihany ny kristiana rehetra any amin’ireny sehatra ireny hijoro ho fanasina sy fahazavana. Amperin’asa avokoa ireo sehatra rehetra misy ireo ; miara-misalahy amin’ny fanatanterahana ny Harambaton-kevitra ary miantso ny kristiana rehetra hanambatra ny hery ; azo ifandraisana araka izany ny Pejy facebook Hfkf / Maro Tohanan'ny Maro sy ny laharana 0349440310 ho an’izay maniry hifandray.
Efa betsaka ireo ezaka natao hampandrosoana an’i Madagasikara saingy izao no misy antsika amin’izao fotoana izao, iaraha-mahita sy iaraha-mahalala na dia kristianina aza no betsaka eto Firenena, ary averimberina foana izany. Raha te handroso isika dia ny ao anatin’ny mangidy no misy ny mamy, ary zoma masina aloha izay vao paka. Tsy misy manam-pitiavana toy izay mahafoy ny ainy ho an’izay tiany. Tsy misy ankoatr’izay, ka asakasak’isika. Isika izany sisa no andrasana raha tiana ho tany lovain-jafy tokoa i Madagasikara.